Bhurugwa → Zvipfeko zvebasa • nyanzvi P & M embroidery yekombuta
Dungarees izvo ndezvimwe zvezvinhu zvekupfeka zvinozivikanwa mumakanika, zvigadzirwa zvekugadzira kana zvevashandi vemakambani ekuvaka. Ivo anowanzo zadzikiswa sehutano nechengetedzo mbatya pamwechete ne nemvere uye hafuMuchokwadi, zvinoshandiswa kwete kwete chete munzvimbo dzebasa repamutemo, asiwo nezvezvinangwa zvakavanzika.
Iwo mabhurugwa atinopa mukupa kwedu akagadzirwa nemachira emhando yepamusoro aine grammage yakakwana. Nekuda kwezvinhu izvi, zvinopesana nekushambidzwa patembiricha dzakakwirira, uku vachichengetedza zvivakwa zvavo nekufamba kwenguva. Iwo mabhurugwa akagadzirwa nezvinhu zvekugadzirisa kwavo: mabhatani uye bhandi rine bhanhire rakasununguka, nokudaro zvichivabvumira kuti vagadziriswe kune vanhu vane akasiyana maumbirwo emuviri. Pamusoro pezvo, ivo vakasonera-mune vanogadziriswa vanomisa.
Dungarees - rakasarudzika sarudzo yekunyaradza kwebasa
Iyo assortment inosanganisira trousers yebasa mune yakadzika tembiricha munguva yechando (makamuri asina kupisa, basa rekunze). Isu tinopawo zvipfeko zvine zvinhu zvinojekesa kuona kuchengetedzwa panguva yebasa kana kwasviba kana munzvimbo dzeveruzhinji.
Dungarees vane homwe dzakasununguka, mamwe mamodheru akaiswawo mamwe muhomwe pamabvi, ayo anotendera kuiswa kwekuisa kuwedzera nyaradzo panguva yebasa inoda kupfugama kwenguva refu pamabvi.
Pakati pebhurugwa rebasa iwe unowana akawanda marudzi anoenderana nemamiriro ekushanda uye zvisaririra zvega: kureba kwechiuno, hovhorosi, nyanzvi uye bhurukwa rekunyevera.
Mune assortment yezvitoro pm.com.pl kune bhurugwa rakagadzirwa revashandi veindasitiri yekuvaka, fitters nevarimi. Kushandisa kwavo, zvakadaro, zvakare kwakaringana pamabasa epachivande akadai sekurima bindu, sechipfeko chinodzivirira zvipfeko zvezuva nezuva kubva kuhutsvina, semuenzaniso panguva yekugadziridzwa kwemba, uye kusvika padanho rakakura kunodzivirira kumatembiricha akaderera.
Ipa kambani yako hunhu hwega
Makambani mazhinji anoikoshesa kuva wega uye kusarudzika, kunyanya kana vashandi vakaita chinzvimbo chemumiriri mukubatana nevanogona kuita makondirakiti nevatengi. Izvo zvine ivo mupfungwa kuti isu tinopa sarudzo yekuodha iwo pamabhurugwa kuti ive yakasimba uye yakashongedzwa munhu kombasi yemakomputa. Embroidery ndeimwe yenzira dzakasimba kwazvo dzekumaka, inoenderana nembatya dzinoda kuwachwa kazhinji.
Allegro trousers rebasacastorama trouserstrousers rebasa remadzimaikugeza sei trousers rebasamabhurugwa ebasa akanaka zvakadiichii chinoshanda bhurugwachii chinoshanda bhurukwa kutengachii chinoshanda mabhurugwa ezhizhaurikurumbidza mabhurugwa api ebasajula basa trousersshanda mapfupi mabhurugwalidl trousers rebasamabhurugwa ese anoshandaolx rinoshanda trousersbasa ma dungareesdungareestrousers rebasa allegrobeta basa trousersmudhebhe wemitorocastorama trouserstrousers rebasa katsiclassic basa trouserstrousers rebasa remadzimaimudhebhe webasachiuno-kureba basa bhurugwaengelbert strauss trousersmashandiro ebhurugwa kwekutengashangu trousers seyokupfekabasa trousers chiitrousers rebasa raunokurudziraayo anoshanda matirauzi kusarudzamajini anoshanda trousersjula basa trousersbhurugwa rebasa pfupileber & hollman trousers rebasatrousers rebasa leroy merlinLidl trousers rinoshandamudhebhe webasa revarumefitter yebhurugwa rebasacamo trousers rinoshandatrousers rekushanda rine bracetrousers rebasa neobhurugwa rebhuruu rebasaBhurugwa rebasa reGermantrousers rebasa obiyakadzivirirwa trousers rebasabhurugwa rebasa rinoratidzaDungarees anoshanda trousersbasa dungarees 100 donjecastorama dungareesolx rinoshanda trouserstrousers rebasa repasaititrousers rebasa rechando
5 / 5 ( 6 mavhoti )